12 - 18 desambra
05 - 11 desambra
19 - 25 desambra
Sabotsy 3 desambra 2016
Fivavahana ho an’ ny Isiraely, voalobok’ i Jehovah
1 Ho an’ ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon’ i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an’ i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin’ ny kerobima, mamirapirata.
2 Fohazy ny herinao eo anoloan’ i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay.
3 Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
4 Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin’ ny fivavaky ny olonao [Na: na dia mivavaka aza ny olonao] ny fahatezeranao?
5 Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina.
6 Ataonao ho fifandirana amin’ ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa.
7 Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
8 Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa.
9 Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany.
10 Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo [Heb: sederan’ Andriamanitra] .
11 Nampisandrahaka ny rantsany hatramin’ ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin’ ny Ony [Eofrata] .
12 Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan’ izay rehetra mandalo eny an-dalana izy?
13 Ny lambo avy any an’ ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy.
14 Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity.
15 Arovy [Na: Dia] izay nambolen’ ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao.
16 Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran’ ny tavanao izy.
17 Aoka ny tananao ho amin’ ny lehilahin’ ny tananao ankavanana, dia amin’ ny zanak’ olombelona izay nampaherezinao ho Anao.
18 Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao.
19 Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.
2 Tesaloniana 1 : 1 - 12
Ny hafalian’ i Paoly noho ny faharetan’ ny Kristiana tao Tesalonika sy ny finoany ary ny fitiavany
1 Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan’ ny Tesaloniana, izay ao amin’ Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo:
2 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo.
3 Tsy maintsy misaotra an’ Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo, ry rahalahy, fa mahamendrika izany, satria mitombo fatratra ny finoanareo, ary be ny fifankatiavanareo rehetra,
4 ka reharehan’ ny tenanay hianareo eny amin’ ny fiangonan’ [Gr. eklesia] Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin’ ny fanenjehana rehetra izay manjo anareo sy ny fahoriana izay iaretanareo-
5 famantarana ny fitsarana marin’ Andriamanitra izany - mba hatao ho miendrika ny fanjakan’ Andriamanitra hianareo, sady izany koa no iaretanareo
6 fa zavatra marina amin’ Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo,
7 ary ny hanome fitsaharana anareo izay ampahorina kosa mbamin’ ny tenanay, raha hiseho Jesosy Tompo, avy any an-danitra mbamin’ ny anjelin’ ny heriny,
8 amin’ ny afo midedadeda, hamaly izay tsy mahalala an’ Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsaran’ i Jesosy Tompontsika,
9 dia olona izay hiharan’ ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin’ ny fanatrehan’ ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny,
10 raha tonga Izy mba hankalazaina eo amin’ ny olony masina sy higagana eo amin’ izay rehetra mino amin’ izany andro izany, satria ninoana ny fanambaranay taminareo.
11 Ary izany no angatahinay mandrakariva ny aminareo, mba hataon’ Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana hianareo, ary hotanterahiny amin’ ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan’ ny finoana,
12 mba hankalazaina ao aminareo ny anaran’ i Jesosy Tompontsika, ary hianareo ao aminy kosa, araka ny fahasoavan’ Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo.